Nzacha akpa nke ndị na-anakọta uzuzu ndị na-emepụta ihe |China Filter Akpa nke Uzuzu Factory & Suppliers
Ndị na-anakọta uzuzu ụlọ ọrụ polyester acrylic nomex P84 PTFE fiberglass PPS filter akpa
Akpa polyester uzuzu nzacha na-ewu ewu na nso nso a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ciment eletriki osisi asphalt osisi mkpofu mmiri ọgwụgwọ ogbako na-abịakwute anyị.
2021 ngwaahịa ọhụrụ ikuku permeability PTFE filter akpa na ụlọ ọrụ china
Ngwunye polyester zuru oke nwere mmetụta p84 basale composite aramid na-abụghị akpa uzuzu na-anakọta ihe nzacha maka ciment.
Ụdị: Akpa nzacha uzuzu
Ịrụ ọrụ: 99.9%
Oge ikike: otu afọ
Igwe ikuku: 3000-100000 m3 / h
Aha ika: SRD
Ihe: Carbon Steel
Akwa mma antistatic agịga chere nzacha akpa
1.Filter akpa nwere ezi thermal kwụsie ike, thermal kwụsie ike nke ozugbo na ogologo oge na-aga n'ihu ojiji nke niile ugbu a engineering nzacha ihe.
2. Ezi nguzogide corrosion.
3. Njirimara anụ ahụ na nke igwe.Akpa nzacha PPS nwere mmiri mmiri dị mma yana ọ dị mfe ijikọ eriri iko mmiri, yabụ ọ dị mfe imeju.A na-eji eriri iko ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka ike dị ike, nguzogide mmetụta, ịgbagọ na elongation nke ihe nzacha PPS.
4.PPS nzacha akpa nwere ezigbo nguzogide na-akpụ akpụ, ọnụ ọgụgụ dị ala nke mgbasawanye linear na nkwụsi ike akụkụ dị mma.
Akpa na-eguzogide okpomọkụ dị elu ụlọ ọrụ pleated nzacha akpa anaghị akpa akwa n'ájá nzacha akpa.
Mmanụ ciment nke ụlọ ọrụ na akwa na-echigharị mmiri nzacha Polyester PE agịga Punched Filter Felt Bag
Akpa klas ciment osisi uzuzu uzuzu envelopu polyester filter bag/akpa aka uwe
Ọkara okpomọkụ na akwa okpomọkụ akwa akpa PTFE iko eriri PPS uzuzu akpa na zuru ezu nkọwa
Akpa akpa uzuzu PPS/PTFE ahaziri ahazi d160-6800 Uzuzu uzuzu egwuregwu akpa nzacha oghere n'ime ụlọ ọrụ ike na ụlọ ciment.
Uru nke akpa nzacha PPS:
1.PPS nzacha akpa nwere ezigbo okpomọkụ kwụsie ike, thermal kwụsie ike nke ozugbo na ogologo oge na-aga n'ihu na-eji niile ugbu a engineering nzacha ihe.
4.PPS nzacha akpa nwere ezigbo nguzogide na-akpụ akpụ, ọnụ ọgụgụ dị ala nke mgbasawanye linear na nkwụsi ike akụkụ dị mma.)
Onye na-anakọta uzuzu chere akpa nzacha pps maka ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ
Electro-Magnetic Pulse Valve, Electrostatic precipitator na-eji, Elektrostatik Precipitator, Ihe nzacha ákwà mgbochi ikuku ikuku, Ihe nzacha akpa ụlọ ọrụ, Onye na-anakọta uzuzu simenti,